पुरुषको तुलनामा महिलामा यौन चाहना कम हुन्छ ? — Paschimnews.com News From Nepal
पुरुषको तुलनामा महिलामा यौन चाहना कम हुन्छ ?
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/८/२६ गते
शारीरिक सम्बन्धका लागि महिलाको तुलनामा पुरुष अग्रसर बन्नु पर्ने हुन्छ । धेरै महिलाहरु पुरुषको यौन इच्छाअनुसार नै शारीरिक सम्बन्धका लागि तयार हुन्छन् । महिलाहरु पुरुषको तुलनामा यौनमा कमै अग्रसर हुने गरेको विभिन्न अध्ययनमा देखिएको छ ।
पुरुषहरुले आफ्नो श्रीमतीसँग यौन इच्छा व्यक्त गर्दा महिलाहरु भने श्रीमानको इच्छालाई सर्वोपरी ठानेर इच्छा व्यक्त गर्दैनन् । धेरै महिलाले पुरुषको यौन सुन्तुष्टिका लागि शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न तयार हुनुपर्छ । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुले आनन्द महसुस गर्छन् ।
धेरैले महिलामा यौन चाहना कम भएको बताउँछन् । यसमा सत्यता छ त ? पुरुषको तुलनामा महिलामा यौन इच्छा कमहुने सत्य भए पनि उनीहरु खुल्दैनन् । यौन इच्छा कम भएर भन्दा पनि उनीहरुले व्यक्त नगरेर त्यसो भएको बेलायती अध्ययनकर्ताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
महिलाहरु यौनमा नखुल्नुको कारणमा शारीरिक तथा प्रजनन् समस्या, उमेर, परिस्थितिलगायतका कारण रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । दैनिक हुने क्रियाकलापले महिलामा धेरै प्रेसर हुन्छ ।
त्यस कारण पनि पुरुषको तुलनामा महिला शारीरिक सम्बन्धका लागि खुल्दैनन् । परिवारको वातावरण, श्रीमानसँगको सम्बन्ध, शारीरिक श्रमलगायतका कारणले पनि महिलाको यौन इच्छामा ह्रास आउँछ ।
महिलाहरुमा उमेर बढ्दै गएपछि टेस्टोरन हर्मोन घट्दै जान्छ । यौन अंगमा बिस्तारै विभिन्न प्रकारका संक्रमण बढ्न थाल्छन् । बच्चा जन्मिएपछि झन्झन् यो समस्या बढ्छ । जीवनशैली पनि बिस्तारै व्यस्त हुन थाल्ने भएकाले पनि यौन इच्छामा कम रुची हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीले पनि यौन इच्छामा कमि ल्याउँछ । मनौवैज्ञानिक रुपमा महिलाहरु जति कमजोर बन्दै जान्छन् ,त्यती नै यौन इच्छामा कमी आउँछ ।